Vaovao - Ahoana no hisafidianana stroller?
Ny haben'ny kalesin-jaza no antony voalohany tokony hodinihina. Raha kely loatra dia azo antoka fa tsy azo atao, satria ny zazakely dia mitombo haingana dia kely amin'ny fahazazany, raha mety ny sary dia manomboka mividy pram kely ianao. Rehefa afaka volana vitsivitsy dia ho hitanao fa amin'ny fitomboan'ny zaza dia lasa tsy mety izany, ary mila mividy vaovao ianao. Mazava ho azy, ny olana amin'ny habe dia misy koa ny habeny aorian'ny aforitra. Raha avoakanao ny zazakely dia ataonao ao anaty vatan-kazo ny pram. Raha kely fotsiny ny habe aorian'ny aforitra dia azonao atao ny mampiasa azy Mora azo.
Ny lanjan'ny pram dia singa iray ihany koa tokony hodinihina. Indraindray ianao dia tsy maintsy mitondra ilay zazakely miaraka aminao, toy ny rehefa midina any ambany na amin'ny toerana be olona ianao, dia ho tsapanao fa fahendrena ny mividy «stroller».
Ny sasany amin'ireo kalesin-jaza dia afaka manova ny firafitra anatiny, toy ny mipetraka na mandainga. Rehefa mandry dia sarona moka kely ny kalesin-jaza. Raha vita dia misy takelaka eo alohan'ilay zaza, izay mitovy amin'ny latabatra kely, hahafahanao mametraka ny tavoahangy sns.
Ny kalesin-jaza sasany dia noforonina araka ny antonony. Ohatra, misy endrik'olombelona maro. Misy toerana azo ahantona ny kitapo, ary toerana misy kojakoja ilaina amin'ny zazakely, toy ny tavoahangin-dronono sy taratasy fidiovana. Raha misy ny endrika toy izany dia mety kokoa ny hivoahana.
Rehefa misafidy kodiarana dia tokony hojerenao koa ny isan'ny kodiarana, ny akoran'ny kodiarana, ny savaivon'ny kodiarana, ary ny fahombiazan'ny fiara, ary raha mora ny miasa mora foana.
6.Safitry ny fiarovana
Satria marefo kokoa ny hoditry ny zaza, dia tsy maintsy jerenao ivelany ny fiara sy ny sisiny sy zoro isan-karazany rehefa misafidy kalesy zaza. Tokony misafidy faritra malama sy malama kokoa ianao, ary tsy manana sisiny lehibe sy tampon-fiara tsy milamina, mba tsy handratra ny hoditry ny zaza marefo.